“Hadii la ii doorto xilka madaxweynaha waxaan ballan qaadayaa inaan soo celiyo hantidii dalka ee la boobay..” – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
“Hadii la ii doorto xilka madaxweynaha waxaan ballan qaadayaa inaan soo celiyo hantidii dalka ee la boobay..”
Madaxweynihii hore ee dowladii KMG ahayd ahna musharax u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa maanta khudbad dhinacyo badan taabanaysa kahor jeediyay xildhibaanada labada Aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya.
Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo u muuqday mid si fiican ugu soo diyaar-garoobay khudbadaasi ayaa ballan-qaaday in hadii loo doorto xilka madaxweynaha Soomaaliya uu soo celin doono hantidii qaran ee la boobay.
“Waxaan ahay mas’uul usoo diyaar garoobay xilkaasi adag, waxaan rabaa dalkaan inaan sumcadiisa iyo karaamadiisa soo celiyo iyadoo laga saarayo meesha wixii maamulka ragaadiyay qabiilka ahaa ama kooxo gaar isku og ama cid kaleba, hadii la ii doorto xilka madaxweynaha waxaan ballan qaadayaa inaan soo celiyo hantidii dalka ee la boobay waxaan aaminsanahay waajib qaran, maanta waa maalintii aan sixi laheyn qaladaadkii hore u dhacay” Sidaasi waxaa yiri Sheekh Shariif Sheekh Axmed.
Dhinaca kale, Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa ballan qaaday sanadka 2020-ka inuu dalka ka suurto galin doonno inay ka dhacdo doorasho xur ah qof iyo codkiisa uu ku dhiiban doonno, taasoo ku imaanaysa dhameystirka dhismaha dalka, kaabayaasha, korontada, biyaha iyo waxyaabaha kale.
Ugu dambeyntii, Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa ka codsaday xildhibaanada labada Aqal ee baarlamaanka Soomaaliya, isagoona tilmaamay inuu yahay shaqsi hore xilkaan usoo qabtay islamarkaana uu khibrad fiican u heysto, islamarkaana uu yahay shaqsi haatan usoo diyaar garoobay qabashada xilkaas.